Wolverhampton oo garoonkeeda Molineux guuldarro xanuun badan ku baday kooxda Arsenal… +SAWIRRO – Gool FM
(Wolverhampton) 02 Feb 2021. Wolverhampton ayaa garoonkeeda Molineux guuldarro xanuun badan ku baday kooxda Arsenal, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa waxay labada kooxood Woves iyo Arsenal ku kala nasteen barbardhac 1-1 ah.
Daqiiqadii 32-aad kooxda Arsenal ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay xiddigooda Nicolas Pepe.
45 daqiiqo kooxda kubadda cagta ee Wolverhampton ayaa loo dhigay rigoore kaddib qalad uu sameeyay David Luiz oo ku muteystay kaarka roosaha, waxaana gool u badalay Ruben Neves, dheesha ayaana sidaas ku noqotay barbardhac 1-1 ah.
Daqiiqadii 49-aad Joao Moutinho ayaa hoggaanka u dhiibay kooxdiisa Wolverhampto, wuxuuna dheesha ka dhigay 2-1, isagoo caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis Pedro Neto.
72 daqiiqo marka ciyaarta mareysay Arsenal ayaa la kulantay niyadjab xoogan, kaddib markii uu kaarta roosaha qaatay goolhaayaheeda Bernd Leno, taasoo ka dhigtay inay ku ciyaaraan 9 ciyaaryahan oo kaliya.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-1 oo ay Wolverhampton kaga adkaatay kooxda Arsenal oo ku soo booqatay garoonka Molineux.
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Man United iyo Southampton ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey